Shaqo doon: xaafiiska shaqada caawinaad kamo helno - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay onsdag 10 maj kl 13.42
"Waxba naguma caawiyaan"
Haweeney shaqo doon ah.. sawir: Henrik Montgomery/TT.
Todobaadkii hore ayey aheyd markii Wasiirka shaqada Ylva Johansson (S) ku dhaliishay Xaafiiska shaqada natiijada marka laga hadleyo gacansiinta dadka shaqo la’aanta waqtiga dheer ku sugnaa.
Rashiid Cusmaan oo ka mid ahaa dadkii aan la kulanay wuxuu yiri, ”maalin kasta halkan ayaan imaadaa, waxaan ku iraahdaa shaqo ayaan u baahanahay, ayaguna waxay igu yiraahdaan shaqadu halkan ma taalo ee orod banaanada ka raadso”.
Xaafiiska shaqada ayuu iska diiwaan geliyey bilowgii sannadkii 2014, ilaa iyo wagaas shaqo raadis ayuu ku sugan yahay, sida uu sheegay:
- Shaqo ayaan u baahanahay, carruur ayaa noo joogta, aniga iyo xaaska midkeena ma shaqeeyo, ayuu yiri.
Rashiid ayaa gelinka hore dhigta dugsiga lagu barto afka isweedhishka SFI, halka gelinka dambe uu yimaado xaafiiska shaqada si uu shaqo uga baadi goobo kombiyuuterka xafiiska.
Rashiid Cusmaan saaxiibkii agfadhiyey oo magaciisa ka gaabsaday inuu sheego ayaa asna dhaleecaysan caawinaada xaafiiska shaqada siiyo dadka shaqo doonka ah:
- Mudo bil ah ayaan isku dayey in aan la kulmo gacanyaraheyga laakiin wax xiriir ah waan ka waayey, xataa meel aan shaqo laylis ka helay ayaa isku dayday inay la xiriiraan laakiin iyaga xataa jawaab kama hayaan, ayuu yiri.
Wuxuu intaas raaciyey in uu xaafiiska shaqada ka diiwaan gashanaa muddo shan sanno gaaraysa balse ay yartahay waxay ku gacan siiyeen.
- Orad adiga shaqo raadso halka caawinad kama helaysid ayey igu yiraahdaan, sida uu sheegay. Aniga dhibataada iheysata waxay tahay waxba ma qoro mana aqriyo.
Laakiin waxaa sidoo kale jira shaqo doon ku qanacsan wax qabadka xaafiiska shaqada. Waxaa ka mid ah Amina Ali oo iyadu muddo ku diiwaan gasahanayd shaqo la’aan.
- Way fiican yihiin shaqaalaha xafiiska shaqadu, shaqo ayey nala raadiyaan. Way na baraan sida shaqada loo raadsado iyo halka laga raadsado.
onsdag 10 maj kl 11.02
onsdag 10 maj kl 17.02
Politiker vill ställa krav på arbetslösa nyanlända
onsdag 10 maj kl 12.08